सुपा देउरालीको दर्शन गर्दै हेर्नुहोस आजको राशिफल ! » बुद्ध भूमि नेपाल
सिसिएमसीको बै’ठक बस्दै, फेरि लकडाउन गर्ने तयारी !
यस्तो छ विल गेट्सकी छोरीको जीवनशैली
जिरे खुर्सानीको ‘जिरे’ यति ठुलो भए, ठुलो भएर काम नपाउँदा रोए । सानै भएको भए फिल्म, सिरियल खेलाउथे होला भन्दै मिडियामा (भिडियो हेर्नुस्)
Home/राशिफल/सुपा देउरालीको दर्शन गर्दै हेर्नुहोस आजको राशिफल !
सुपा देउरालीको दर्शन गर्दै हेर्नुहोस आजको राशिफल !
आज २०७७ मंसिर ६ गते शनिबार । ज्योतिष शास्त्रमा जन्म समय अनुसार फलादेश हुन्छ । सोही अनुसार उनीहरुको दैनिकी कस्तो रहन्छ ? भन्ने विषयमा भविष्यवाणी गरिन्छ । तपाईको आजको दिन कस्तो रहनेछ ? ज्योतिषी एस्ट्रो राजले यस्तो फलादेश गर्नुभएको छ-
काममा सफलता मिल्नेछ । आर्थिक पक्ष सफल रहनेछ । पारिवारिक सद्भाव रहनेछ । कूटनीतिक नियोगको सहयोग मिल्ला । साथिभाईको सहयोग मिल्नेछ । प्रेममा सफलता प्राप्त हुनेछ। धार्मिक कार्यमा रूची बढ्नेछ ।
आफ्नो क्षेत्रमा प्रभुत्व जमाउन सक्नु हुनेछ । काम देखाएर अरूलाई प्रभावित गर्न सक्नु हुनेछ । मुद्दा मामिलामा तपाईँकै जित हुनेछ । सत्रु पक्ष परास्त हुनेछन् । दाम, इनाम र प्रतिष्ठा कमाउने बेला छ। आध्यात्मिक क्षेत्रमा पनि रूची बढ्नेछ ।
लामो समयपछि पूर्ववत जिम्मेवारीमा फर्कनु हुनेछ । साथिभाइले तपाईँको कामको तारिफ गर्नेछन् । अग्रजको साथ सहयोग रहँदा मन हर्षित हुनेछ । सत्रु पक्ष पाखा लाग्ने छन् । बोलीको भरमा कार्य सम्पादन हुनेछ । नयाँ व्यक्तिसँगको सम्बन्ध विस्तार हुँदै जानेछ । शैक्षिक क्षेत्र सफल रहला ।
सम्पूर्ण उद्यम र परिश्रमको राम्रो प्रतिफल प्राप्त हुनेछ । दाम, इनाम र प्रतिष्ठा कमाउने बेला छ। विशिष्ट व्यक्ति भेट्ने अवसर जुट्नेछ। आँफूभन्दा वरिष्ठ व्यक्तित्वको साथ सहयोग रहनेछ । प्रेम सम्बन्ध सुमधुर बन्नेछ । अध्ययन अध्यापनमा सफलता मिल्ला । दाजुभाइसँगको सम्बन्ध राम्रो बन्नेछ । अचल सम्पत्ती हात पार्ने योग छ ।
कला र गलाको प्रभाव बढ्नेछ । अग्रजको सद्भाव रहनेछ । राजनीतिक तथा पेशागत क्षेत्रमा पदोन्नतीको योग छ । खर्च बढ्नाले आर्थिक पक्षले सताउन सक्छ । सन्तान सुखको योग छ ।
भोली मंसिर ०८ गते सोमबार, हेर्नुहोस राशिफल ।
७ मंसिर २०७७, आईतवार २०:५३
सुपा देउरालीको दर्शन गर्दै हेर्नुहोस मंसिर ०७ गते देखी १३ गते सम्मको साप्ताहिक राशिफल
७ मंसिर २०७७, आईतवार १९:३१
भोली मंसिर ०७ गते आईतबार, हेर्नुहोस राशिफल।
६ मंसिर २०७७, शनिबार २०:१०